दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि एमाले मुलुकको सबै भन्दा ठूलो पार्टी बन्छ- शंकर पोख्रेल – Maitri News
दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि एमाले मुलुकको सबै भन्दा ठूलो पार्टी बन्छ- शंकर पोख्रेल
शंकर पोख्रेल – स्थायी कमिटी सदस्य
मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था निकै जटिल बन्दै गएको छ । दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन हुनु अघि नै सरकार फेरवदलको प्रयासमा नेपाली काँग्रेस र माओवादी लागि परेका छन् । यसले पनि जटिलता थपेको छ । भरतपुरमा पुनः मतदान गर्नु पर्ने निर्णय निर्वाचन आयोगले गरेपछि झन् जटिलता थपिएको छ । यि नै विषयमा केन्द्रित भएर एमाले स्थायी समिति सदस्य शंकर पोख्रेलसँग मैत्रिन्युज टडकमले गरेको कुराकानीः
स्थानीय तह निर्वाचनकै बीचमा सरकार फेरवदलको प्रक्रियामाकाँग्रेस–माओवादी जुटेका छन् । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
पहिलो चरणको निर्वाचनपश्चात सरकार परिवर्तनको कुरा अत्यन्त अनुचित कुरा हो । चरणवद्ध चुनाव भनेको दुईवटा चुनाव होइन, एउटै चुनाव हो । एउटै चुनाव दुईवटा सरकारले गर्ने कुरा सोच्न पनि नसकिने कुरा हो । तर हामी कहाँ त्यस्तो अनुचित कुरालाई पनि स्वभाविक बनाउने प्रयास भइरहेको छ । त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीले पहिलो चरणको निर्वाचन प्रकृयाले पूर्णता नपाएकै अवस्थामा राजिनमा दिनुभयो । त्यो पनि सरकारको नीति कार्यक्रम आउनु एकदिन अघि । सत्ता गठवन्धका बीचमा भएको सत्ताको सौदावाजी मुलुको हितमा भन्दा पनि सत्तास्वार्थमा आधारित रहेछ भन्ने कुरालाई यसले पुष्टि गर्दछ । हाम्रो पार्टीले स्थानीयतहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर मात्र राजिनामा दिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव पनि दिएको थियो । तर सत्तापक्ष भित्रैको दवावमा परेर प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनुभयो । यसलाई हाम्रो पार्टीले अनुचित र गैरजिम्मेवार कदमका रुपमा लिएको छ ।
एमाले सरकार परिवर्तनको प्रक्रियामा सहभागी नहुने भएको हो ?
यतिवेला हाम्रो जोड संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र तिनै तहका निर्वाचनमा सम्पन्न गर्ने कुरामा केन्द्रित रहेको छ । संसदको अवरुद्धताका कारणले प्रधानमन्त्री चयनको प्रकृयामा समस्या उत्पन्न भएको हो । तर, हाम्रो उद्देश्य प्रधानमन्त्री चयनको प्रकृया रोक्ने होइन । हामी संसदको अवरोध हटेसँगै प्रधानमन्त्री चयनको प्रकृयामा हामी सहभागी हुन्छौँ । आज मात्रै प्रमुख दलहरुका बीचमा पहिलो चरणको निर्वाचनका क्रममा अनुचित र अनियमित क्रियाकलाप भएको र त्यसलाई आगामी निर्वाचनका क्रममा दोहरिन नदिने प्रतिवद्धता आएसँगै संसदको अवरोध समाप्त गर्ने कुरा भएको छ । अव प्रधानमन्त्री चयनको प्रकृया अघि वढ्छ । हामी प्रधानमन्त्रीको रुपमा सत्ता गठवन्धनका तर्फवाट प्रस्तुत हुनुभएका उमेद्वार शेरवहादुर देउवाको विपक्षमा मतदान गर्छौ ।
सरकार फेरवदलले स्थानीय निर्वाचनमा असर गर्ने सम्भावना कत्तिको देख्नु भएको छ ?
सरकार परिवर्तनका कारणले कतै स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन नहुने हो कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ । विगतमा शेरवहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका समयमा चुनाव गर्न नसकेका कारणले प्रजातन्त्र नै संकटमा परेका कारणले पनि मानिसहरुका मनमा संसय पैदा भएको छ । त्यसमाथि दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति पटक–पटक परिवर्तन गरिएका कारणले आशंका उत्पन्न भएको छ । हाम्रो पार्टीले त्यस विषयमा पनि स्पष्टता खोजेको छ । आज वसेको प्रमुखदलको वैठकमा तोकिएकै समयमा दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने प्रतिवद्धता सत्ता पक्षले जनाएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । हाम्रो पार्टीले समयमा चुनाव गर्ने कुरामा खवरदारी गरिरहने छ ।
दोस्रो चरणको निर्वाचनमा एमाले कमजोर बन्ने आँकलन काँग्रेस–माओवादीको छ । सत्य हो ?
पहिलो चरणको तुलनामा दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने क्षेत्र हाम्रालागि अनुकुल रहेको छ । गएको संविधानसभाको निर्वाचनमा हाम्रो पार्टी १ नम्वर प्रदेश र ७ नम्वर प्रदेशमा पहिलो स्थान पाउन सफल रहेको थियो । ५ नम्वर प्रदेशमा प्राविधिक कारणले हामी दोस्रो स्थानमा रहे पनि हाम्रो अवस्था निकै राम्रो छ । २ नम्वर प्रदेशमा पनि हामी दोस्रो स्थानमा रहेका थियौँ । आउने निर्वाचनमा सबँै ठाउमा हाम्रो अवस्थामा निकै राम्रो सुधार भएको छ र परिणाम पनि सोही अनुसार आउनेमा हामी विश्वस्त छौ । २ नम्वर प्रदेशमा एमाले कमजोर छ भन्ने प्रचार गरिएको छ । आउने चुनावमा हामी त्यहा पनि पहिलो स्थान हाँसिल गर्न सफल हुनेछौँ । नेपाली काँग्रेसको तुलनामा त्यहाँ हाम्रो अवस्था निकै सुदृढ भएको छ । मधेसी मोर्चाको अवरोधका वावजुत हाम्रा गतिविधिहरु जारी रहेका छन् । मधेसी मोर्चाको सहमतिमा मात्र कार्यक्रम अघि वढाउने नाममा उनीहरु जनताका बीचमा पुग्न समेत सकेका छैनन् ।
एमाले दोस्रो निर्वाचनमा पनि पहिलो बन्ने आधार के–के हुन् ?
हाम्रो राष्ट्र र जनताका पक्षका हाम्रानीति र काम नै हाम्रो जितका आधार हुन् । राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वाभिमानका पक्षमाहाम्रो पार्टीले लिएको अडानलाई जनताले मन पराएका छन् । नाकावन्दीका समयमा नेकपा (एमाले)को नेतृत्वको सरकारले जसरी त्यसको दृढतापूर्वक सामना ग¥यो । त्यो जनताको चाहना अनुसारको कुरा नै थियो । भारत जस्तो ठुलो शक्तिको अनुचित कार्यको सामना गर्नु र असफल बनाउनु चानचुने कुरा थिएन । त्यसको गहिरो प्रभाव नेपाली जनतामा परेको छ । नेकपा (एमाले)को नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सामथ्र्यको वृद्धिका लागि चीनसँग ऐतिहासिक संझौता गर्न सफल भयो । त्यसको गहिरो प्रभाव पनि नेपाली जनतामा परेको छ । नेकपा(एमाले) नेतृत्वको सरकारले नीतिकार्यक्रम र बजेटका माध्यमवाट मुलुकको विकास र समृद्धिको खाका अघि सार्न सफल भयो । उक्त नीति कार्यक्रम र बजेटका माध्यमवाट मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातिर अग्रसर भएको छ । उक्त सरकारले नै तराई मधेसको समग्र विकासको योजना अघि सा¥यो । अहिलेसम्म कसैले गर्न नसकेको तराई मधेसको विकासका सन्दर्भमा बजेट केन्द्रित गर्ने काम ग¥यो । जसलाई तराई मधेसका जनताले गहिरो गरी महसुस गरेका छन् । यसका साथै नेपालको खनिज सम्पदाको अन्वेषण, उर्जा संकटको समाधान र पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा अघि सारिएका रणनीतिक योजनाहरुले पनिजनताको मन जित्न सफल भएका छन् । एमालेको नेतृत्वको सरकार गठन भएका समयमा नै मुलुकले केहीनयाँ कुरा पाउन सकेको छ । संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनका पक्षको एमालेको अडानले पनि जनतामा सकारात्मक सन्देश गएको छ । यी सवै पृष्ठभूमिका नै नेकपा (एमाले)ले दोस्रो चुनावमा पनि राम्रो परिणाको अपेक्षा गरेको छ । जुन कुराको संकेत पहिलो चरणको निर्वाचनमा देखिइनै सकेको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने क्षेत्र नेकपा(एमाले)को प्रभाव क्षेत्र समेत भएका कारणले परिणाम अझै राम्रो हुने निश्चित छ ।
देउवाकै नेतृत्वमा सरकार गठन भयो भने प्रदेश र केन्द्रीय निर्वाचन माघ ७ भित्रमा हुने सम्भावना कत्तिको देख्नु भएको छ ?
त्यसमा पनि संसय पैदा भइरहेकै छ । विशेषगरी संविधान संशोधनन गरी चुनाव गर्न नसकिने सत्तापक्षको अडानका कारणले निर्वाचन अनिश्चित वन्नपुगेको छ । स्थानीयतहको निर्वाचनमा जनताको उत्साहजनक सहभागिता र सफलताले चुनावका पक्षमा वातारवरण तयार भएको छ । प्रमुखदलहरुका बीचमा जेठ २३ गतेका दिए भएको ४ वुँदे सहमतिका माध्यमवाट हामीले चुनावको सुनिश्चिताको आधार तयार गर्ने कोशिस गरेका छौ । हाम्रो प्रयास समयमा प्रदेश र संघको चुनाव गर्ने कुरामा केन्द्रित रहने छ ।
माग ७ भित्रमा संविधान कार्यान्वयन भएन भने ?
संविधान त कार्यान्वनमा गइसकेको छ । माघ ७ भित्र संघ र प्रदेशको चुनाव सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा जटिलता थपिने अवस्था आउछ । अहिलेको रुपान्तरित संसदको आयु माघ ८ सम्म मात्र रहेको छ । त्यस्तो अवस्थामा संवैधानिक र राजनीतिक संकट उत्पन्न गर्ने कोशिस हुनसक्छ । हाम्रो पार्टी मुलुकलाई त्यो दिशातर्फ जान नदिनका लागि सचेत छ । हाम्रो सचेत प्रयत्न र खवरदारीले नै स्थानीय चुनाव सम्पन्न हुँदैछ । त्यसरी नै प्रदेश र संघको चुनावगर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौ ।
एमालेले पहिलो चरणमा प्राप्त गरेको नतिजाबाट तपाईँहरु सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
निश्चय नै पहिलो चरणको निर्वाचनको परिणामबाट हामी पूर्ण सन्तुष्ट छैनौ । हामीले यो भन्दा राम्रो परिणाको अपेक्षा गरेका थियौ । शहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामिण क्षेत्रमा हाम्रो स्थिति राम्रो बन्न सकेन । जनताका बीचमा हामीले हाम्रा कुरा पु¥याउन नसक्दा नै त्यस्तो अवस्था आएको हाम्रो निष्कर्ष छ । हामीले ती कमजोरीहरुलाई सुधार गरेर दोस्रो चरणमा अझ राम्रो परिणाम ल्याउने योजनामा छौ ।
अहिले भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणनाको सन्दर्भमा जुनखालको प्रयास भएको छ यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग हो । सत्तामा रहेका प्रमुखदलहरुका बीचको गठवन्धनलाई चितवनका जनताले अस्वीकार गरिदिएका छन् । नेपाली कांग्रेस चितवनको पहिलो शक्तिका रुपमा रहदा रहदै उसले सत्ताको लागि कार्यकर्ताको भावनालाई तिलान्जली दिने काम ग¥यो त्यसले पनि उनीहरुलाई असर पुगेको देखिन्छ । त्यसमाथि चुनावमा जनताको मतलाई अस्वीकार गर्ने जुन प्रवृत्ति सत्तापक्षमा देखिएको त्यो गंभीर चिन्ताको विषय हो । हार्ने निश्चित भएपछि नियोजित रुपमा मतपत्र च्यात्ने र पुनः मतदानका लागि सम्वैधानिक अंगलाई वाध्य बनाउने सत्तापक्षको प्रयासले दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई निकै जटिल बनाई दिएको छ । सत्तारुढ दल र निर्वाचन आयोगको गलत क्रियाकलापका विरुद्ध हामी सर्वोच्च अदालतमा गएका छाँै । त्यहाँवाट न्यायिक फैसला हुने अपेक्षा हाम्रो पार्टीले गरेको छ । चितवन भरतपुरको प्रकरणले सत्तापक्ष कतिसम्म नांगिन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ । जनताले पनियसलाई नजिकवाट नियाली रहेका छन् । आउने निर्वाचनमा त्यसको परिणाम अझै स्पष्ट रुपमा देखिने छ । जनता नै संवैभन्दा ठुला न्यायाधिस हुन् । उनीहरुले मतदानका माध्यमवाट त्यसको फैसला गर्नेछन् भन्ने कुरामा नेकपा (एमाले) विश्वस्त छ ।